Ry Tontolo, Ndeha Hihaona amin’i Afrika! Fomba Iray Vaovao Hitantarana Ny Tanibe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Septambra 2017 5:10 GMT
Mahakivy matetika ny mamaky ireo fitantaràna an'i Afrika any anaty media mahazatra. Amin'ny lafiny roa, raha ny marina. Voalohany indrindra, izay faritana ho mendritra hanaovana tatitra, dia tena mahakivy. Faharoa manaraka izany, satria tsy dia mirona loatra amin'ny tena zava-misy sarotra sy manetsiketsika ao amin'ilay tanibe, amin'ny fidadasiky ny fahasamihafana rehetra misy ao aminy, fa aleony miresaka an'ireo fitsaratsaram-poana tsotsotra fotsiny.
Izay no antony mampientanentam-po amin'ny nanombohana ny tranonkala vaovao iray an'ny fikambanana masoivohom-baovao erantany Reuters natokana mihitsy ho an'ilay tanibe – Reuters Africa -. Ary ny fampidirana ireo blaogy any amin'ny pejin'ny firenena tsirairay ao amin'ilay tranonkala no tena mampientam-po indrindra.
Ao anatin'ny pikantsary eto ambany misy ny pejin'ny tambajotran'i Oganda, hitanao ao, eo amin'ny ankavananan'ny sarintany, faritra iray misy lohateny hoe “BLOGS”. Eo ambany, ahitana ireo rohim-pifandraisana mankany amin'ireo lahatsoratra fampidirana vao haingana indrindra ao Oganda avy amin'ny Global Voices. Ahitana famahanana mitovitovy ho an'ny tsirairay amin'ireo firenena maherin'ny 50 ao amin'ny tanibe.
Ny Reuters no mpamatsy matanjaka indrindra ny Global Voices sady mety tsara ny fahafahany mampiasa ny votoaty avy amintsika, amin'io fomba io. Mampiseho ihany koa izy io ny fiakaran'ny lanja omen'ireo masoivohom-baovao ny fahafahan'ireo feo azo itokiana mba hitondra ny fomba fijeriny, ny avy eny ifotony sy hevitra manodidina an'ireo tranga izay rakofany. Hoy ny Reuters eto:
Manohana ny fanolorantenan'ny Reuters mba handrakofana an'i Afrika amin'ny antsipirihany sy amin'ireo pitsopitsony rehetra ny fandefasana ny Reuters Africa, mba hanomezana dikany iray malalaka kokoa an'ireo olana sy ireo hevitra mahakasika azy, ary hitrandrahana ireo firenen-tsamihafa sy ireo kolontsainy. Samy hokendren'ny Reuters daholo, na ireo rehetra monina ao amin'ny tanibe, na ny olona maneran-tany manaraka ny fivoaran'ny Afrikana, ny fampiasàna vola ary ireo vaovao…
Ao anatin'ireo ezaka mitohy ataon'ny Reuters mba hampidirana andiam-peo sy tsikera midadasika kokoa ho ao anatin'ny votoatin'ny vaovaony, ho ampidirin'ilay vohikala koa ireo blaogy manokana avy amin'ny firenena amin'ny alàlan'ny Global Voices, tambajotra iraisam-pirenena an'ireo blaogera.
Dingana goavana mankany aloha ity, saingy mbola lavitra ny làlana hizorana. Misy ireo vondrom-piarahamoninà blaogy lehibe sy mahafinaritra manerana ny firenena maro, toa an'i Nizeria sy Kenya nefa misy ireo faritra hafa tena zara raha misy ny fandrakofana, kanefa ireo hafa, toa an'i Etiopia sy Zimbaboe izay feran'ny governemanta ny fanehoankevitra amin'ny tambajotra.
Manantena isika fa ny fampidirana ireo blaogera ho ao anatin'ireo tetikasa sahala amin'io dia tsy hanome fotsiny vovonana iray ho an'ireo izay elabe no tsy nandrenesana ny feony, fa koa mba handrisika ireo hafa hanjohy ny adihevitra ary hilanja tsindry amin'ny anaran'ireo izay maniry ny hiteny saingy tsy afaka.